Fikarohana momba ny firaisana Ny Tantaram-pinoana Ny Zaza Ankizy Sammy Fernando | Sujith Jayaratne - Fikarohana momba ny vatana
Fomba fiafarana: Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany
From: Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny biolojia: Contribution to the etiology of birthmarks and birth defects, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Article by: Walter Semkiw, MD, from ateraka indray
Ny fiainana talohan'i Sammy Fernando
B. Selvin Fernando, izay mety ho fantatra amin'ny anaram-bosony, Sammy, dia teraka tamin'ny Janoary 3, 1919 tany Gorankana, Sri Lanka. Gorankana dia 10 kilaometatra na 17 kilometatra atsimon'i Colombo, renivohitr'i Sri Lanka. I Gorankana Sammy dia anarana hafa antsoina hoe Selvin.
Ny rain'i Sammy dia i B. Jamis Fernando, izay nanana hadisoana teo amin'ny masony havanana, izay nanesorana ny family. Ny anaran-dreniny dia i W. Lucia Silva. Sammy dia nanan-janaka lahy antsoina hoe Milton, izay nahatsapa ny tsy fahombiazan'ny fiantsonan'ny lamasinina. Niteraka korontana goavana i Milton ary tsy maintsy napetraka tao anaty baomba. Taorin 'ny nanesorana ilay entona, dia nandeha an-tongotra i Milton ary tsy maintsy nampiasa lakandrano. Ny fianakaviana dia niaina tao amin'ny faritra Gorakawatte ao Gorakana. (1)
Tamin'ny naha tanora azy, dia nandany fotoana be tao amin'ny tempolin'i Boddhis, izay antsoina hoe Kale Pansala, izay midika hoe "Tempolin'ny Ala", i Sammy. 100 metatra na metatra fotsiny ihany no tao an-tranony. Nisy moanina roa tao amin'io tempoly io, niaraka tamin'i Sammy nifankahalala. Iray amin'ireo moanina ireo no nantsoina hoe Amitha. Amin'ny maha-lehibe azy, i Sammy dia hanome be dia be ho an'ity tempoly ity.
Taoriana kely teo amin'ny fiainany, dia nitety fivahinianana tany amin'ny lemak'i Adama i Sammy, tendrombohitra avo tany Sri Lanka. Ny fitenim-paritra dia ny hoe ilay Bouddha mihitsy no nijanona teo amin'io tampon'izany.
Sammy dia nanatrika sekoly ambaratonga voalohany antsoina hoe Kabal Iskole, midika hoe "sekolin-jaza" amin'ny teny Anglisy. (2)
Sammy Dances, mihira sy mitendry fitaovana ao amin'ny efitrano fandefan'ny fianakaviana
Sammy nanana talenta voajanahary hihira, milalao zavamaneno sy dihy. Nianatra nilalao ny mandoline japoney izy ary rehefa nihalehibe izy, dia nanjary nahay nilalao baomba antsoina hoe rabana izy, ary koa tambatra lehibe iray teo amin'ny tokotany na metatra lava.
I Jamis, rain'i Sammy, dia nanana rafitra manokana natsangana tamin'ny tranom-pianakaviana natao ho an'ny dihy sy mozika, izay hanehoan'i Sammy ny fahaizany. Ny trano dia nanana tafo iray sy rindrina misokatra, noho izany ny fety dia nanana ny toetry ny any ivelany, saingy voaro amin'ny orana. (3)
Sammy dia miasa ho an'ny lalamby ary mandalo amin'ny fitiavana miaraka amin'i Maggie Alwis
Tamin'ny zokiny, i Sammy dia nampiasain'ny orinasa iray fiara fitateram-bahoaka ary taty aoriana ny lalamby nataon'ny governemanta, izay niasany tamin'ny milina.
Sammy dia tia ny vehivavy tsara tarehy antsoina hoe Maggilin Alwis, na dia niantso azy hoe Maggie na Maggio aza i Sammy. Nanambady izy ireo tatỳ aoriana ary nifindra tao amin'ny trano noraisin'i Maggie i Sammy. Ilay trano dia teo anelanelan'ny Colombo sy ny tanàna hafa antsoina hoe Galle. Ny lalan-dàlana dia lalambe lehibe ary kamiao ara-barotra no nandalo izany, matetika tamin'ny haavo. Ny fananan'i Maggie, ary ankehitriny Sammy, dia nitatra nankany amin'ny renirano teo akaiky. Nanan-janaka vavy, izay nantsoina hoe Nandanie, ireo mpivady.
Nandritra ny vanim-potoana voalohany teo amin'ny fifandraisan'izy ireo, ny fanirian'i Sammy ny hiaraka amin'ny Maggie dia tena lehibe loatra ka matetika izy no tsy nahita asa hiarahana aminy. Vetivety dia tsy nisy ny famoahana azy, ka voatery niala tamin'ny asany izy rehefa taona 25. (4)
Sammy dia lasa Distiller sy Bootlegger
Taorian'ny nakatony tamin'ny lalamby, dia nanana safidy vitsivitsy i Sammy noho ny asa. Namaha io olana io izy tamin'ny nahatonga azy ho mpanodikodin-tena avy amin'ny arrack, fisotroana alikaola novokarina tao Sri Lanka. Sammy dia tonga soa tamin'ny asany ary ny fangatahan'izy ireo dia nitaky be.
Indrisy fa ho an'i Sammy ny famokarana arrack tamin'izany fotoana izany dia ny governemanta monopole ary tsy ara-dalàna ho an'ny hafa handoto azy io. Tahaka izany, i Sammy dia nijanona tao anaty ala tao ambadiky ny tranony. Nizara ny lozika izay novokariny tamin'ny sambo izy, nandehandeha teo amoron'ny renirano izay nanakaiky ny fananany. Sammy nanamboatra daka ho an'ny sambony teo amin'ny taniny.
Sammy dia mandany fotoana any am-ponja, mitondra mpivarotra ambongadiny, manao knuckles varahina ary manamboatra làlana miafina
Na izany aza, nanafintohina tsindraindray ny fandaharam-potoan'i Sammy ny polisy ary hisambotra azy. Ny polisy dia niandry teo an-tokotanin'ny tranony mandra-pahatongan'i Sammy hody, amin'izay fotoana izay dia hoentina am-ponja izy. Nogadraina izy, fara fahakeliny, tamin'ny 8. Mba hisorohana ny manampahefana dia nanapaka lalan-kely tao anaty ala i Sammy mba hahafahany miditra an-tranony avy any aoriana. Tamin'izany fomba izany dia tsy nila niditra tao amin'ny varavarana fidirana izy, izay teo akaikin'ny lalana teo anelanelan'i Colombo sy Galle.
Ny fandefasana entana, araka ny iantsoana azy any Etazonia, dia tsy natao ho an'ny tsy hay hadinoina, ary ny toetra amam-pananan'i Sammy no marina. Fantatra fa tsy natahotra izy, nanana lavaka lava sy varahina varahina, fantatra koa amin'ny hoe knucklebusters, izay fitaovam-piadiana metaly natao tamin'ny tanana mba hampamonoana ny fahafatesana. (5)
Ankoatra ny maha-mpamokatra mahay azy, i Sammy dia mpankasitraka be loatra ny fisotroana; be loatra i Ian Stevenson nanamarina fa ny fisotroan-drononon'i Sammy dia niantoka ny fitsaboana ny fisotroan-toaka. Rehefa nandeha ny sambony i Sammy mba hivarotra arrack, dia matetika izy no tsy nitondra sakafo, ary nahafa-po izany fialam-boly izany.
Toerana iray nisotro toaka be indrindra tao aminy dia trano fonenana tany Moratua. Sammy dia nandray ny rafozan-janany, Martin Alwis, ary koa ny iray hafa mpividy, Wimalasdasa de Alwis, mankany amin'ny toeram-ponenan'ny Moratua.
Rehefa tao an-trano izy, dia nisotro tamin'ny seza tiany indrindra i Sammy ary nihevitra ny fihazakazahany ny tongony, mitovy amin'ny lotus ampiasain'ireo misaintsaina.
Ny Kitapon'i Sammy ho an'ny sigara sy t-shirts Terrylene
Toy ny mpifoka sigara maro i Sammy dia mpifoka sigara ihany koa ary ireo sigara sigara tiany indrindra izay misy efatra sy telo Roses, izay lafo kokoa noho ny sigara tsara kokoa ao Sri Lanka. Sammy koa dia niavaka tamin'ny akanjony ary naniry ny hitondra akanjo lafo vidy vita amin'ny fibre synthetic antsoina hoe Terrylene.
Miaraka amin'ireto akanjo ireto izy dia hanome sarong, saron-doko tahaka ny akanjon'ireo lehilahy any Sri Lanka. Sammy dia hamatotra ny tendrony farany amin'ny sarong amin'ny kofehy iray izay hipoitra eo ambonin'ny sarong, eo ambany elatra na kibay vantony. Sammy dia nitazona vola tamin'ity knot ity. (6)
Ny Tempera sy ny Fanafihan'i Sammy amin'ny Maggie
Matetika no mihamitombo ny fironana nataon'i Sammy rehefa nisotro toaka izy. Hoy ny iray tamin'ireo naman'i Sammy: "Nalahelo be izy rehefa nisotro ary tsy nisotro intsony izy." (7)
Tanjona matetika amin'ny hatezeran'i Sammy no Maggie. Rehefa nisotro toaka izy, dia nanomboka nandresy lahatra izy ary nanozona tamim-pihetseham-po, tamin'ny fampiasana andian-teny momba ny teny fianianana. Noraisin'i Maggie ny paikady handao ny trano ary hiala amin'ny lalana Colombo-Galle.
Nanampy trotraka ny alahelony i Sammy, nividy tompovavy, izay nahazoany zazalahy tsy ara-dalàna, izay nantsoina hoe Sunil Fernando. Sammy dia tsy naneho fitiavana tamin'ny zanakavaviny, Nandanie, ary tsy nanome vola ny zanany vavy.
Kusuma nanome an'i Refuge Sammy
Mifanohitra amin'izany kosa, i Sammy dia tena malala-tànana ho an'ny tena mpiray tampo aminy, Kusuma Dabare, izay zanakavavin'ny zandrin'i Sammy. Kusuma niaina niaraka tamin'ireo ray aman-drenin'i Sammy, Jamis sy Lucia, tao an-tranony tao amin'ny faritra Gorakawatte ao Gorakana.
Taorian'ny fisotroan-dronono dia nandeha tany amin'ny tranon'ny ray aman-dreniny i Sammy ary nangataka an'i Kusuma handrahoina azy ary nanery azy hanomana sakafo mahasalama ho azy. Ity lamina ity dia niseho 3 in-droa isan-kerinandro. Tamin'ny fankasitrahana, nanome vola an'i Kusuma malalaka i Sammy. Sammy koa dia nanana fironana hanome vola ho an'ny ankizy, ny mahantra ary araka ny voalaza, ny tempolin'i Kale Pansala. (8)
Ny fahafatesan'i Gorakana Sammy
Ny famonoana an'i Sammy dia nitranga tamin'ny Janoary 29, 1969. Izy no mamo ary nanomboka nifamaly tamin'i Maggie. Martin Alwis, rahalahy, dia teo. Toy ny mahazatra, nandositra an'i Sammy i Maggie tamin'ny nandaozany ny trano ary nandao ny lalana Colombo-Galle. Nanaraka azy i Sammy, niaraka tamin'i Martin tamin'ny tifitra. Sammy dia nijanona tao amin'ny fivarotana niaraka tamin'i Martin mba hividy sigara.
Rehefa nividy ny fividianany i Martin, tao amin'ny toetrany mamo, dia nivoaka ny toeram-pivarotana ary nandeha teny an-dalana i Kammy, toerana nahitana kamiao iray. Nandrenesan'i Martin ny feon'ny fiara nanjo an'i Sammy, nihataka ilay fivarotana ary nahita azy teny an-dàlana teny an-damosiny. Sammy dia maty taoriana kelin'ny 50 taona.
Na dia teo aza ny hadisoany, nahatsiaro ny fahalalahan-dRamatoa Sammy ny mahantra, ka nanangona vola ampy izy ireo mba handoavana ny fandevenana azy rehetra. Raha ny marina, nanome vola be dia be i Sammy fa ny fananana tokana izay azony tamin'ny fotoana nahafatesany dia peratra, fehikibo ary ny lokony varahina. (9)
Sammy dia efa enina volana tatỳ aoriana
Sujith Lakmal Jayaratne dia teraka tamin'ny volana 8, 1969, volana maherin'ny enim-bolana taorian'ny nahafatesan'i Sammy. Ny ray aman-dreniny dia nipetraka tao an-tendrombohitra Lavinia, izay 3 kilaometatra na 5 kilometatra atsimon'i Colombo. Gorankana, tanàna nipetrahan'i Sammy, dia iray kilometatra 7 hafa na kilometatra 12 hafa any atsimo amin'ny Tendrombohitra Lavinia. (10)
Ny fahatsiarovan'i Sujith ny fiainana taloha dia misy ny fiasana amin'ny lalamby sy ny fahalavoan'i Milton
Talohan'ny nahalalany ny ankamaroan'ny voambolana dia nanandrana naneho fahatsiarovana ny fampodiana talohan'ny nahaterahana i Sujith. Hampiasa fihetsiketsehana sy feony izy mba hiezaka hifampiresaka. Rehefa nanontaniana azy ny zavatra nataony nandritra ny androm-piainany teo aloha, dia naneno feo izy izay nanindrona ny motera locomotive.
Rehefa nihanitombo ny kabariny, nilaza izy fa niasa tamin'ny fiarandalamby ary nokapohina tamin'ny asany. Ian Stevenson dia nahavariana fa i Sujith dia nahatsiaro fa tapitra hatreo amin'ny lalamby, izay nitranga fony i Sammy dia 25 taona, izay midika fa saika efa ho 55 taona no niova rehefa nitatitra ny zava-nitranga i Sujith. (11)
Ankoatra izany, talohan'ny nianarany niresaka, dia nanandrana nanambara izy fa nisy olona lavo ary nanjary nalemy noho ny fanasoketana olona iray izay nanindrona sy nampiasa tehina. Taoriana kely, rehefa afaka nifampiresaka i Sujith, dia nilaza tamin'ny reniny fa ny olona izay lavo sy voavonjy vokatr'izany dia ny rahalahiny teo amin'ny fiainana teo aloha, ny anarany dia Milton, izay marina momba an'i Milton Fernando. (12)
Fahatsiarovan'i Sujith ny fiainany taloha ho Gorakana Sammy
Raha mbola zaza i Sujith dia nilaza fa Sammy no anarany ary avy any Gorakana izy. Nilaza izy fa nantsoina hoe "Gorakana Sammy." Nanoratra matetika momba ny rainy i Sujith, izay nolazainy fa i Jamis ary nanana maso ratsy. Nanana ny fironana hiteny izy amin'izao fotoana izao. Ohatra, hoy i Sujith, "Jamis dia any Gorakana," raha ny marina dia maty i Jamis tamin'ny volana septambra 1970. Imbetsaka nangataka ny halefa any Gorakana izy. Nanao izao fanambarana izao izy: "Tsy tranoko izany ary te halefa any Gorakana aho." (13)
Nilaza i Sujith taty aoriana fa niaina tao amin'ny faritra Gorakawatte ao Gorakana izy, izay toerana niainan'i Jamis sy ny fianakaviany ary toerana nahalehibe an'i Sammy. Ian Stevenson dia tena nahavariana ny fahaizan'ny Sujith momba ny teny hoe Gorakawatte, satria io dia efa tranainy ho an'ny faritra izay tsy nampiasaina nandritra ny taona maromaro. Taona maro talohan'ny nahaterahan'i Sujith, dia nisy anarana vaovao, Ampityawatte, nampiasaina ho an'ny manodidina. (14)
Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha: i Sujith dia nahatsiaro ny Tempolin'i Dilapidated Schoolhouse sy Forest
Nilaza i Sujith fa nandeha tany an-tsekoly tany Kable Iskole izy, izay midika hoe "sekoly nahavariana", ary ny mpampianatra azy dia antsoina hoe Francis. Sammy tokoa no nandalo ity sekoly ambaratonga fototra ity ary ny mpampianatra azy dia antsoina hoe Francis. (15)
Nilaza i Sujith fa nandeha tany Kale Pansala izy, izay nadikany hoe "Tempolin'ny Ala", fa ireo moanina roa niaina tany ary efa nanome vola ho an'ity tempoly ity izy. Nilaza izy fa iray amin'ireo moanina no nantsoina hoe Amitha. Sammy dia nandray anjara tamin'ity tempoly ity, izay metatra tokotokony 100 tao an-tranony, ary i Sammy dia nahalala ny Amitha moanina.
Nanaitra ihany koa i Ian Stevenson fa fantatr'i Sujith ny teny hoe Kale Pansala. Rehefa nanao fanambarana i Sujith, dia tsy nampiasaina nandritra ny am-polo taona ny teny hoe Kale Pansala. Na teo aza ny fanatrehan'i Kale Pansala nandritra ny taona voalohan'i Sammy dia nifindra tany amin'ny toerana hafa ilay tempoly ary nantsoina tamin'ny anarana hafa tanteraka, Dharmarakshitaramaya.
Indray, Ian Stevenson dia nampiaiky fa mety ho tafiditra ao anatin'ny fahatsiarovan-tena ao Sujith ny fiainan'i Sammy. (16)
Sujith's Life Life Phobia of Trucks
Nanomboka hatry ny ela, i Sujith dia nanana tahotra marika na tohodranon'ny kamiao. Tsy takatr'izy ireo hoe nahoana izy no natahotra an'izany. Avy eo, indray alina dia nifoha tamin'ny torimasony i Sujith ary nihazakazaka nanodidina ny trano izy ary namoha ny olon-drehetra tao amin'ny fianakaviany. Dia hoy izy tamin'izy ireo:
"Fantatrao ve fa nihazakazaka ny kamiao iray aho ary toy izany no nahafatesako?"
Hatramin'ny Anglisy Sri Lanka, ny teny Anglisy ho an'ny kamiao dia ampiasain'ny Sri Lankans, izay "lorie". Taorian'ny nanandratana ny rehetra hanambara ny antony nahafaty azy tamin'ny alàlan'ny fampodiana azy teo aloha, dia niverina indray i Sujith.
Indray mandeha, namoha ny fianakaviany indray izy ary nilaza fa te hiditra any Gorakana, dia niverina indray natory. (17)
Ny fiainana amin'ny fiainana an-taonany: Ao amin'ny fianakaviana Teetotaler, toy ny ankizy, Sujith mangataka amin'i Arrack ary mihomehy izy dia mamo
Koa satria tsy nisy nisotro toaka tao an-tranon-dry zareo, dia taitra izy ireo rehefa nanontany i Sujith, toy ny ankizy.
Taorian'izay dia nanontany matetika i Arjith. Rehefa tsapany fa tsy mifanaraka amin'ny fangatahany ny fianakaviany dia handeha ho any amin'ny mpifanolobodirindrina aminy izy mba hangataka fiadiana. Ny iray tamin'izy ireo dia nankatoavina tamin'ny farany, saingy tsy nasiany fialokalofana tamin'ilay zaza raha nandratra sy nanakiana ny mpifanolobodirindrina ny renibeny Sujith.
Indraindray, rehefa nomena sodina hosotroina izy, dia nilaza i Sujith fa hampiditra azy ny zava-pisotro misy alikaola. Hivezivezy izy tahaka ny hoe mamo sy mangalatra amin'ny tany ary miteny hoe "bila," izay midika hoe "mamo."
Noraisiny ihany koa ny fihazonana ny fisotroan'i Sammy, amin'izay izy dia hipetraka eo amin'ny seza iray miaraka amin'ny tongony. Rehefa avy nisotro ny soda izy, dia nanandratra ny feony tamin'ny tenda izay nataon'ireo mpihinam-bitsika. Nesoriny avy eo ny vavany, toy ny hoe nanala ny sasatry ny fisotroana zava-pisotro mahatsiravina sy mahery avy amin'ny molony indray izy, fihetsika iray mampiavaka ny mpamoaka mpangalatra.
Indraindray dia nianjera tamin'ny tany fotsiny i Sujith ary niteny hoe "mamo aho," na dia tsy misy soda aza. (18)
Sujith dia mahatsiaro ny maha bootlegger amin'ny fiainana taloha
Niteny tamin'ny fianakaviany i Sujith fa namidiny koa ny arrack. Nolazainy fa indray mandeha dia nameno sambo izy ary nidina ny sambo. Ity tranga ity dia nitranga 8 taona talohan'ny nahafatesan'i Sammy.
Tsaroany koa fa afaka miditra amin'ny tranony izy amin'ny alàlan'ny ala mikitroka. (19)
Ny fiainana any am-piadanana: Sujith dia mangataka satroka efatra sy sangisangy sigara
Raha tsy nifoka sigara ny fianakaviana iray, dia gaga ihany koa izy ireo raha nanontany i Sujith, izay 4 taona, nangataka azy ireo hahazo sigara efa-bolana ho azy, izay iray amin'ireo marika nofenoin'i Sammy. Indray andro, tsy nanaiky izy ireo. Na izany aza dia nanandrana nifoka sigara i Sujith ary nandrehitra sigara iray avy amin'ny mpitsidika iray izy ary nanontany ny reniny ho fanazavana. (20)
Fihetseham-po amin'ny fiainana: Sujith dia mampahatsiaro ny fifandirany amin'ny Maggie sy ny fitiavany ho an'i Kusuma
Niteny tamin'ny fianakaviany i Sujith fa nanana vady antsoina hoe Maggie izy izay niady. Rehefa nanontany ny antony niadiany tamin'i Maggie izy, dia namaly i Sujith fa noho izy mamo. Nolazainy fa manana zanakavavy iray antsoina hoe Nandanie izy ary ny zanakavavy iray antsoina hoe Kusuma, izay zanakavavin'ny zandriny vavy, izay nanana volo lava be.
Nilaza izy fa tao Gorakana i Kusuma ary nanome vola azy. Niteny i Sujith fa nanao sakafo matsiro ho azy i Kusuma, izay antsoina hoe "tifitra vy", izay karazan-tsakafo. Ireo fanambarana rehetra ireo dia marina ny momba ny vadin'i Sammy sy ny tsy fantatra. (21)
Taorian'izay, hoy i Sujith, "Rehefa manomboka mahazo vola aho dia hanome ... an'i Kusuma," mampiseho ny fikasany hanavao ny fifandraisany. (22)
Sujith no mahatsiaro ny momba ny fahafatesany taloha
Nilaza i Sujith fa rehefa nifamaly tamin'i Maggie izy dia nandeha tany amin'ny fivarotana iray mba haka sigara, avy eo dia nidina teny an-dalana ary novonoina rehefa namely azy ny kamiao. Ny Sujith dia mety hanahaka ny fihazakazahany eny an-dalana rehefa avy namely. Nipetraka teo an-damosiny izy, ary nisy sandry iray nipoitra. Izany no fihazakazak'i Sammy taorian'ilay fiampangan'ny kamiao, araka ny tadidin'ny raharaham-bahiny, Martin. (23)
Wattarappola, Monk Buddhist, mamotopototra ny fiainan'i Pastor Sujith Fahatsiarovana
Tonga hino ny fianakaviana fa nanana fahasembanana tany Gorakana i Sujith, saingy tsy nahalala olona tao amin'io tanàna io ry zareo. Ny fianakaviana dia nanana havana, Wattarappola Nadaratana, izay mônkìna. Rehefa nahare momba ny fanamarihan'i Sujith momba ny fiainany taloha izy dia nanadihady ireo fanambarana ireo ary nanapa-kevitra ny hanadihady.
Wattarappola nandeha tany Gorakana mba hanao fanadihadiana. Tao no nifankahitany tamin'i Kusuma Dabare, tamim-pahafinaretan'i Sammy, tamin'ny March 13, 1972, ary nilaza taminy momba ny fanambaran'i Sujith. Tamin'ny voalohany, tsy fantany ny tokony hatao amin'ny toe-javatra, saingy nody izy ary niresaka tamin'ny fianakaviany momba ny fahatsiarovan-tenan'i Sujith taloha. (24)
Kusama sy hitsidika an'i Sujith
Nandeha tany Mt. Lavinia roa andro taty aoriana, tamin'ny 15 1972, XNUMX, ary nitady an'i Wattarappola, izay nilaza fa tsy mety aloha ny hihaona amin'i Sujith. Nolazainy kosa fa hiverina any Gorakana izy ary hihaona amin'ny fianakavian'i Sammy. Nanao izany izy ary nanamafy fa marina ny fanambaran'i Sujith mikasika ny fiainan'i Sammy Fernando.
Niparitaka nanerana an'i Fernando ny vaovao ary Kusuma sy 10 hafa avy ao Gorakana dia tonga tao an-tranon'i Sujith tamin'ny mars 30, 1972. Ny fahitana antoko lehibe tahaka izao no nanahirana an'i Sujith. Nitazona ny reniny izy ary tsy nilaza na inona na inona.
Niverina izy ny ampitson'iny niaraka tamin'ny 4 hafa ihany. Nahafantatra azy i Sujith ary nantsoina hoe Kusuma amin'ny anarany. Namantatra ny iray tamin'ireo mpitsidika hafa ihany koa i Sujith, ilay zanak'anabavin'i Sammy, ary niantso azy tamin'ny anarany, Kithsiri. (25)
Indray mandeha, nisy havany akaiky an'i Sammy Fernando antsoina hoe Princie tonga tao an-tranon'i Sujith ary nijoro teo anoloan'ny trano. Na dia nisy vahoaka marobe niaraka taminy aza, dia nahafantatra azy i Sujith ary nilaza hoe: "Midira." Hoy izy: "Ianao no fitsipika." (26)
Maggie nitsidika an'i Sujith, ilay lehilahy niainany taloha
Tonga nitsidika an'i Sujith tany an-tendrombohitra Lavinia i Maggie, mpitondratena tao Sammy. Wattarappola, izay resy lahatra fa ny fianakavian'i Sujith dia tsy nahalala hoe iza izy tamin'ny fotoana nanatrehany fivoriana voalohany, no nanadihady ny sehatra. Ny fitantarany ny zava-nitranga dia manaraka:
“Ny 3 aprily 1972, Maggilin Alwis dia niantso ny tranon'ilay zaza niaraka tamina tovovavy roa hafa mitovy taona aminy. Nandritra ny 20 minitra dia tsy niteny ilay zaza. Taorian'izay dia niantso tampoka 'Maggie' tamin'ny vehivavy iray izy ary nilaza hoe: 'Handeha eny an-dàlana i Maggie.'
Nanontanianay an'ilay ramatoa izahay raha nomena anarana tsara izy. Nilaza izy fa ny vadiny taloha dia nantsoin'ny Maggie azy foana, ary rehefa nandeha namoahany an-trano izy ary naka fifandirana taminy, dia nandeha foana teny an-dalana izy.
Taorian'izany dia nihazakazaka tao an-trano ilay zaza. Nandritra ny tsy naha-teo azy dia nahazo mpitsidika daholo ny mpitsidika tao amin'ny efitra iray tsy hita maso ary izaho dia teo an-davarangana. Nivoaka ny zaza rehefa afaka minitra vitsy ary nanomboka nitalaho mafy hoe:
'Aiza i Maggilin? Aiza i Maggilin? Nankany Gorakana. Nankany Gorakana. '
Nanomboka nihazakazaka tao an-trano izy ary natsipy tao amin'ny efitrano misy ny vehivavy.
'Tiako ianao Maggie, tiako ianao Maggie', hoy izy nankeo Maggilin.
Nanomboka nitomany ilay ramatoa ary nandray ny fitiavana tamim-pitiavana. Hoy ilay zaza:
'Jereo izay nataonao tamiko. Jereo ange ny nataonao tamiko.
Nanontany azy izahay hoe inona no dikan'izany. Nanazava izy fa tamin'ny andro nahafatesan'i Sammy Fernando ny fahafatesany, dia tonga tao an-trano izy mamony mamo ary nanomboka nifanditra taminy. Nandositra izy ary nanomboka nanenjika azy ary notifirin'ny kamiao iray.
Taoriana kely, rehefa nandao an'i Gorakana [ny fiverenany], niaraka tamin'i Maggalin, dia nijanona kely ilay zaza ary te hiaraka amin'izy ireo. "(27)
Sujith dia mamantatra ny fiainany taloha izay misotro toaka
Ny sasany tamin'ireo naman'i Sammy sy fianakaviana dia nitsidika an'i Sujith tao amin'ny Tendrombohitra Lavinia. Sujith dia toa nahatsiaro hoe iza amin'ireo olona ireo no misotro toaka miaraka amin'i Sammy ary tsy nanao izany. Nanasa ny sangisangotr'i Sammy ihany izy.
Rehefa tonga teo amin'ny Tendrombohitra Lavinia i Martin, vinanton'i Sammy, dia nanolo-kevitra i Sujith fa handeha any amin'ny toeram-pisakafoanana ao Moratuwa, izay i Martin sy Sammy no nandeha. Rehefa tonga nitsidika azy i Wimalasdasa de Alwis, namany hafa misotro divay Sammy, dia niresaka tamin'ilay lehilahy antitra efa zokinjokiny toy ny namana efa tranainy efa ela ary nanontany azy izy. (28)
Sujith dia nentina tany amin'ny fiainany taloha
Tamin'ny 29 aprily 1973 dia nitondra an'i Sujith tany Gorakana i Wattarappola. Rehefa nentina tany amin'ny tranon'i Jamis, toerana nahalehibe an'i Sammy, dia nitety ny trano i Sujith nitady an'i Jamis. Rehefa tsy nahita azy i Sujith dia nanao izao fanambarana izao izy: “Tsy eto i dada Jamis.” Tamin'io fotoana io no fantatr'i Sujith voalohany fa maty i Jamis. (29)
I Sujith dia nanaiky ihany koa ny rafitra misokatra ho an'ny trano ary nilaza marina fa nampiasaina ho an'ny dihy. Tao amin'ny trano, i Sujith dia nangataka ny baomba nataon'i Sammy. Rehefa navoaka ilay izy, satria lehibe loatra i Sujith mba hitazona (metatra lava), dia nipetraka teo amboniny izy ary nifanindry tamin'ny farany. (30)
Sujith dia nahafantatra koa ny peratra, ny fehikibo ary ny fetsy varahina. Naniry ny hitazona ireo lahatsoratra ireo i Sujith ary nitondra azy ireo tany amin'ny Tendrombohitra Lavinia, ary tezitra noho ny tsy navela hanao izany. (31)
Fihetseham-piainana taloha: fitoviana amin'ny fanomanana an'i Sammy sy Sujith momba ny sakafo sy ny fitafiana
Nisy fitoviana teo amin'ny samihafa teo amin'i Sammy sy Sujith. Mikasika ny sakafo dia samy tia sakafo matsiro izy ireo, toy ny kiriolona mafana. Fihetseham-po iray hafa ifampizarana miavaka dia mitaky ny fangatahan'i Sujith amin'ny akanjo lafo vidy Terrylene. Ian Stevenson aza dia nahita an'i Sujith nanao akanjo toy izany. (32)
Ny ankamaroan'ny lehilahy manao sarongo ao Sri Lanka dia mamatotra ny tendron'ilay sarongo eo ambonin'ny elatra. Mifanohitra amin'izany kosa, Sammy sy Sujith dia nametraka ny tendron'ny sarongo ambanin'ny bokotra ary samy namorona kofehy lehibe izy ireo ary ny sarongo tao an-tampon'ny akanjo. Rehefa nanontaniana i Sujith hoe nahoana izy no nanao ny knot toy izany, dia nanazava izy fa ny katsaka dia toerana hikarakarany vola, fahazarana izay ananan'i Sammy ihany koa. (33)
Sujith's Phobias avy amin'ny fiainana taloha
Nanana tahotra mifandray amin'ny fiainany taloha toa an'i Sammy i Sujith. Raha vao 8 volana monja dia nahatsapa ny reniny fa manana valiny feno tahotra amin'ny teny hoe "lorie" i Sujith. Nanararaotra io tahotra io tamin'ny filazana "lorie" raha tsy nisotro ny ronono i Sujith. "Fitaovam-piadiana" hampitahotra azy ho fanekena. (34)
Araka ny voalaza, matetika i Sujith dia te haka an'i Gorakana. Raha nanontaniana izy raha handeha amin'ny kamiao izy, dia tsy nety izy, rehefa nanaiky hoentina any Gorakana amin'ny fiara izy, dia nanaiky. Wattarappola dia nanamarika fa "natahotra ny tondra-drano" i Sujith. (35)
Natahotra ny polisy i Sujith. Tsikaritry ny nenitoany fa raha mahita polisy izy dia niditra tao an-trano. Nanontany ny nenitoany izy taorian'izay raha nandalo ny polisy, izay midika fa azo antoka izy. (36)
Ny fiainana any am-piadanana: ny Sujith dia manana ny fironana nataon'i Sammy ho mahery setra
Sammy dia noheverina ho tsy natahotra ary i Sujith dia naneho ny tsy fahampian-tsakafo tanteraka. Samy manana ny fironana henjana izy ireo.
Ian Stevenson dia nanatri-maso an'i Sujith nanipy ny iray tamin'ireo mpifanolo-bodirindrina izay nanana "zotom-po sy fikirizana lehibe", ary nahita ihany koa i Sujith nahazo olona hafa, izay nisarika ny raharaham-barotra nataony, niaraka tamin'ny totohondry. Stevenson koa dia nahita kodiarana Sujith tamin'ny renibeny.
Wattarappola dia nilaza fa nahita an'i Sujith nanosika ny reniny ho any an-jorony ary avy eo dia nibitsiboka azy, nilaza fa toy izao ny fanafihan'ny polisy. Ny nenitoan'i Sujith dia nilaza fa rehefa niraviravy i Sujith, dia indraindray mety handrahona ny hanakanana ilay nanao ratsy amin'ny antsy.
Na dia teo aza ireo toetra mahery ireo, dia naneho fahalalahan-tanana koa i Sujith, toa an'i Sammy. (37)
Sujith dia manana fihetseham-po mahatsiravina ho an'ny Maggie, ny vadiny taloha, ary avy eo dia ratra azy tahaka an'i Sammy
Nisy parallèle hafa koa nifandraika tamin'i Maggie. Tamin'ny Jolay 1973, rehefa efa ho 4 taona i Sujith dia nanambara izy fa handeha ho any an-tranon'i Maggie ary tsy hiverina. Nilaza izy fa any an-tranon'i Maggie no hatory, ary nahatsapa ny fianakaviana fa tsy ny hatory fotsiny no tanjony.
Rehefa nifankahita tamin'i Sujith i Maggie dia lasa tia azy izy ary nitsidika an'i Sujith tao an-tendrombohitra Lavinia matetika. Rehefa afaka kelikely, dia nitsahatra ny fitsidihany izy, nanazava fa nanjary tsy nety ny Sujith.
Mifanohitra amin'izany, raha nanambady i Kusuma Dabare, dia nanasa an'i Sujith sy ny fianakaviany ho amin'ny fampakaram-bady izy. Tadidio fa rehefa mamo i Sammy, niady tamin'i Maggie ary nandao ny tranony, dia nitady fialofana tany an-tranony izy, izay toerana nomanin'i Kusume sakafo mahavelona ho azy. (38)
Xenoglossy: Fanapahan-kevitra avy amin'ny fiainana taloha
Ny fianakavian'i Sujith dia tena mety. Noho izany dia gaga izy ireo nahita fa ny vokatr'i Sujith dia voambolan'ny teny maloto. Sammy dia nanana fahazarana mianiana sy mihorakoraka ny hafanam-po rehefa mamo.
Ian Stevenson dia nandeha hatramin'ny nametrahana fa azo averina amin'ny xenoglossy izany, izay ahafantaran'ny tsirairay ny fiteny vahiny izay tsy nianatra tamin'ny vanim-potoana amin'izao vanimpotoana izao. Nieritreritra i Stevenson fa tsy voatery nianatra tao an-trano ny valin-teny feno fitenin'i Sujith, noho ny toetra amam-panaon'ny reniny sy ny renibeny. Ny rain'i Sujith dia nandao ny fianakaviany fotoana fohy taorian'ny nahaterahan'i Sujith, noho izany dia tsy nisy olon-kafa afaka nampianatra an'io zaza io. (39)
Reincarnation & Fisehoana toa izany mandritra ny androm-piainany
Ny fitoviana amin'ny endrika hita maso dia voamarika teo amin'i Sammy sy Sujith. Na dia ny fomba nandehanany aza, ny fitondrany, dia mitovy. (40)
Ny finoana Kristiana dia mino fa Sujith no fampanorenana indray ao amin'i Sammy sy Sujith manome ny Goosebumps zanaky Sammy
Na dia samy Bodista aza ny fianakavian'i Sammy sy Sujith, dia ny kristiana ihany koa i Semy Nimal Rodrigo, zanakavavin'i Sammy. Hoy izy:
"Katolika romana aho ary tsy mino ny fahaterahana indray, fa noho ny zavatra hitako tamin'i Sujith sy ny fankasitrahany dia resy lahatra aho fa izy no Sammy nateraka." (41)
Horonantsary iray hafa maneho ny herin'ny faneken'i Sujith dia midika an'i Sunil Fernando, zanaka tsy manara-dalàna an'i Sammy. Tonga nitsena an'i Sujith tao amin'ny Tendrombohitra Lavinia i Sunil. Sunil dia olon-tsy fantatra tamin'ny fianakavian'i Sujith ary tsy nampahafantatra ny tenany tamin'ny olona izy. Fantatr'i Sujith izy ary niteny hoe: "Avia atỳ, Sunil."
Nilaza i Sunil fa ny fankasitrahan'i Sujith azy dia nanome azy "fahatairana mahatsiravina", ary koa gooseflesh. (42)
Ny fivoaran'ny Sujith taty aoriana sy ny fitondrantena fisotro taloha
Raha mihoatra ny 6 taona i Sujith, dia tsy niresaka momba ny fiainany teo aloha intsony izy tahaka an'i Sammy, tsy nampiasa hafanam-po intsony izy ary nanjary natanjaka kokoa. Na izany aza, rehefa nahita ny olona nisotro toaka izy, dia nieritreritra izy fa tokony hanana ny tenany manokana. (43)
Fahafantarana ny fiainana taloha sy ny fitsipiky ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Ny fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray mankany amin'ny iray hafa: Voalaza fa misy ny fitoviana eo amin'ny fisehoana ara-batana eo amin'i Sammy sy Sujith, ary koa ao amin'ny lalany.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Teraka indray i Sammy rehefa lasa Sujith tany amin'ny Tendrombohitra Lavinia, izay 5 kilaometatra na 7 kilometatra miala an'i Gorankana, ilay tanàna nonenan'i Sammy. Taorian'ny nizaran'i Sujith ny fitadidiany ny fiainany taloha, ny fianakaviany dia afaka nahita ny fianakavian'i Sujith taloha ary nihaona tamin'ny fianakavian'i Sammy izy, ny vadiny taloha ary ireo sakaiza nisotro taloha.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Nahazo fobia kamiaobe mafy i Sujith ary na dia zazakely vao 8 volana aza dia naneho tahotra lehibe ny teny hoe "lorry", izay nohazavaina tamin'ny namonoan'ny kamio an'i Sammy. Sujith koa dia nanjary tsy nankahala polisy satria nigadra, toa an'i Sammy, imbetsaka.
Xenoglossy: Ian Stevenson dia nahatsapa fa ny voambolana goavambe nataon'i Sujith momba ny expletives na teny cuss dia mendrika ny xenoglossy, satria tsy nisy fomba nahafantaran'i Sujith an'io fiteny io tamin'ireo vehivavy roa tena nitaiza azy.
1. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana sehatr'izao tontolo izao, Boky II, Sri Lanka, University Press of Virginia, Charlottesville, 1977, p. 242-243